Izambatho zabafazi abakhulelweyo
Kukho amaxesha apho kuwo wonke oomama abaza kubakho iimpahla eziphambili zazingabikho zi-shady kunye ne-denim. Namhlanje, ukukhulelwa kowesifazane akusiyo yonke into yokubambisa izitayela zakho ozithandayo uze ugcwalise i-wardrobe ngezinto "ezincinci" izinto ezifihlakeleyo ukuba zifihla imeko enomdla, kodwa ekusebenziseni nje ukuphazamisa ukubonakala kwakho. Ndikholelwe, kukho iingubo ezifashiniweyo kwabasetyhini abakhulelweyo. Ukususela "kwindawo enomdla" yayo unokwenza ubuqu bokwenene. Abaqulunqi beFashion bacebisa ukuba zeziphi izinto ezilungele ukuzalisa ikhabethe labesetyhini abakhulelweyo ukuba bajonge.
Iingqayi zokubhinqa abafazi abakhulelweyo akufanele nje zikhulule, kodwa zifake imodeli. Emva kwakho konke, oomama abaninzi bokomva "baya kuphuma emacaleni," bunzima kwizinto eziphathekayo, kodwa izicathulo ezindala. Yaye intuthuzelo ngokomoya ibaluleke kakhulu ekukhulelweni okunempilo. Ngethamsanqa, ngoku i-indalo yefashoni yonke ibhinqa elikhulelweyo liyadalwa. Yilokho abaqashi beembadada abacebisa, ukudibanisa noogqirha. Okokuqala, izicathulo mazibe zenziwe ngezinto zendalo. Le yesikhumba, i-suede, ubomvu, i-cotton okanye iingubo zelinen. Ukwenza izicathulo zikhangeleke ezithakazelisayo, ukuhlanganiswa kwezixhobo kunye nemibala kuvunyelwe. Kwizicathulo, kufuneka kube neseshoni ye-ergonomic, ngokukhethekileyo eyenziwa ngenyawo yowesifazane okhulelweyo. Kakade ke, iifake zifakiwe. Emva koko, iphezulu isithende, isomelele kwinqanaba lombane kunye nesimo sengqondo somfazi. Izithengi kufuneka zikhethwe phantsi kwaye zizinzile. Iinqununu ezikhethiweyo kunye nezilungeleyo ziya kuba: i-moccasins, i-sneakers, i-ballet flats, ii-boots, ii-boot kunye ne-bootlegs ebanzi , izibhatshi zakudala, izibhoti ze-jockey.
Umama onokuzenzekelayo wangomso ongenakukwazi ukwenza ngaphandle kwengubo! Iingubo, asiyiyo yonke into eyenza ukuba owesifazane okhulelwe anjengeWinnie the Pooh - ingubo efanelekileyo kubafazi abakhulelweyo. Kwiyiphi na ivenkile ekhethekileyo yabasetyhini abakhulelweyo unako ukuthabatha iifestile eziphathekayo ezikhethiweyo ezizodwa eziza kugubungela isisu sakho. Okanye uthenge ibhulukhwe ngesinqe esisezantsi. Yiyiphi imodeli okuyikhethayo incike kwibala lomdwebo, umlo kunye nobukhulu bomzimba, kunye nakwiimpawu ze-anatomical zesimo. Ifomu efanelekileyo kakhulu yebhulukwe iqhutywe okanye ibubanzi obuphakathi. Amagqabi amancinci afanelekileyo kuphela kwabesetyhini abaneemilenze ende kunye nomzimba onqabileyo (ngokuqinisekileyo, malunga nobukhulu!). Kuzo zonke iintlobo zeebhulukhwe kubalulekile ukuba ziqaphele - zibeka ubunzima kumfanekiso kwaye azilungele. Iingubo eziphakanyisiweyo ziya kuba yinto ekhethekileyo kubafazi abakhulelweyo bazo zonke iintlobo zamanani. Kungcono ukulibala ngeentambo ezimfutshane kwithuba elithile. Iimpawu eziphathekayo: iingubo ezivela kwindwangu zendalo kunye ne-elastane, i-leggings, i jeans kwi-denim elastiki. Ngendlela, i-jeans inokuboleka kwi-wardrobe yomthandayo. Ukongeza kubo ubhinqa, i-jeans esuka ngaphantsi, udibanise ibhande elibanzi lamadoda kwaye ugqoke izicathulo kwisithende esincane okanye ibhallet.
Iidonki, iibhola, i-T-shirts
Iinjongo kufuneka zigqutywe ngento. Ngaphandle kweengubo, amaqabunga, i-jumpers, I-T-shirt isetyhini ekhulelwe ayikwazi ukwenza. Into ephambili kukuba ukhethe umbala ofanelekileyo nokuma. Yongeza ii-cardigans, iebhatyi kunye ne-shazubles (le yenziwe i-cardigan ende, ikhumbule ingubo yehlobo). Izambatho eziphathekayo zivulekele ngokubanzi ukuvavanya. Iingubo zangaphandle zinqununu zentsimbi zihlanganiswe ngokugqibeleleyo kunye neebhulukhwe ezincinci kunye nejee - kodwa ngenxa ye-leggings, ayifanele. Iimodeli, zincinciwe emagxeni, kodwa zatshitshiswa phantsi, ngokugxininisa kwikhola, i-trapezoid-iya kuvala ngokufanelekileyo isisu kwaye inike ubungakanani obuyimfuneko kumfanekiso wesifazana. Imibala ephathekayo iya kuba yimibala emincinci emancinci, nayiphina imidwebo eyahlukileyo esuka ezantsi, intyatyambo encinane. Azinconywa - iimpahla ezixutywe ngokubambisana okukhulu, iimpapasho eziphambili ezivela phambili, iipakethe ezinkulu, imivimbo engezantsi. Unokukhangela kwi-wardrobe yomntu. Mhlawumbi, ezinye zeekhati ziya kukufanisa. Vela nje iimpahla zakho - kunye nesambatho esilungile!
Iingubo ziyakuthwala ngabasetyhini abakhulelweyo. Kodwa qaphela ama-hoodies angenangqondo! Ngengubo yabasetyhini abakhulelweyo kufuneka babe nemigca ecacileyo. Umzekelo, gxi ninisa isifuba, amahlombe, okanye isisu. Kutheni i-clumsily ifihla into ebonakalayo. Kunoko! Kulo lonke ihlabathi, abafazi bafuna ukugqamisa ukujikeleza, ukuvakalisa isimo sembeko somama esizayo. Ngokomzekelo, iingubo eziphathekayo ngoku zi-bolles ze-bolles kunye ne-curly silhouette eneemigca ezicacileyo zezantsi, emagxeni kunye nemikhono ezichanekileyo zibeka i-accents kumfanekiso. Ingubo yindlela efanelekileyo yokuphuma. Ngokomzekelo, u-Angelina Jolie, xa ekhulelwe, kwindlela yonke enokwenzeka wayigxininisa ubufazi bakhe kunye nezigqoko kunye nesinqe esincinciweyo, kokubili ekhaya kunye nephepheni ebomvu. Kwaye kwangoko wayekhangeleka njengento!
Abaninzi abafazi abakhulelweyo bacinga ukuba iingubo ziza kunika umgqomo ongalinganiyo. Njengoko, oomama bafuna ukubheka njenge-slim kunokwenzeka nakwi-trimester yesithathu yokukhulelwa. Okwangoku, i-skirt ayikho imbangela yesimboli se-baggy, kodwa ukhetho olungalunganga. Izikhwama zabasetyhini abakhulelweyo (njengamaqhankqalazi) banokuba nomgca ophantsi kunye nesigqubuthelo esiswini. Kodwa ifomu elifanelekileyo leengubo yabasetyhini abakhulelweyo baya kulungiswa, kuncitshiswe kancane. Ubungakanani bengubo buxhomekeke kwimilo - ingaba yimixiki emagqatsheni, kunye neyona mini phakathi kwethanga. Ingubo kufuneka yenziwe yenziwe ngokugqithisileyo. Kodwa kufuneka sigweme imodeli enamaqhina - ayongeza isisindo somthwalo obunzima.
Kwiqanda, kuyimfashini ukugqoka iipaki, iingubo kunye neengubo eziluhlaza okanye i-trapezoidal silhouette, ngeendlela ezicacileyo zesifuba kunye nehlombe. Azikho iingubo ezinomgca wokugada, i-fasteners ze-breasteders kunye nefomethi ye-baggy jackets! Ubungakanani bempahla yangaphandle buqulathwe yintetho yakho. Kuyinto enqwenelekayo ukuba imodeli yayinezantsi.
Ukutshintshela izibhengezo ezivela kwi-tummy ejikelezayo, sebenzisa izixhobo eziqaqambileyo: iiglavu, iigoksi, iinqanawa, izikhwama. Wonke umntu uya kubakhokela ngakumbi - kwaye ujabulele umfazi ovuyayo kunye nobungqina. Isisu ngumcimbi wedwa wena nomntwana wakho!
Khumbula ukuba kwiingubo eziphathekayo kubafazi abakhulelweyo kufuneka zisetyenziswe izinto ezisemgangathweni. I-Flexible synthetics ivumelekile ukuba igcine isikhunta esincinci. Izambatho zimele zikhulule, zingaphazamisi ukuhamba kwegazi. Kwaye kubaluleke kakhulu - wena kunye nabanye kufuneka uvuyise. Emva kwakho konke, ukuba umfazi, iimpahla zizona zinto zixhasayo.
Ukubuyiselwa kwefestile: iimpahla kufuneka zine-autumn-ebusika ngo-2015-2016
Iholide kunye ne-T & B: I-TOP-3 imifanekiso ekhangayo ngoMatshi 8
Iipatata kunye negorgonzola
Indlela yokucima amazinyo akho ekhaya?
Lobster nge lemon
Ubudlelwane phakathi koogxa
I-Ravioli enee-green peas kwi-lemon broth
Ukuxhomekeka kwengqondo kwimeko yokutya
I-Matting Face Cream
Indlela yokukhetha ibhodi ye-ironing efanele
Iindlela zokunciphisa umzimba "Xenical"
Ukutya imifuno ngewayini elibomvu kunye ne-nutmeg